Hotanterahina any Riyadh ny ehnof festival lehibe indrindra eran-tany
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Hotanterahina any Riyadh ny ehnof festival lehibe indrindra eran-tany
Ny fikambanam-be eran-tany Ethnogames Confederation (Kyrgyzstan) miaraka amin'ny Camel Club (Saudi-Arabia) dia mikarakara ny hetsika manerantany "Nomad Universe" izay hatao ny 9-19 martsa 2019 eo amin'ny sehatry ny Fetiben'ny rameva King Abdulaziz ao amin'ilay Fanjakana an'ny Arabia Saodita.
Ny tena tanjon'ny "Nomad Universe" dia ny fitehirizana sy ny fifohazana amin'ny lova ara-tantara sy ny fahasamihafana ny kolontsaina am-boalohan'ny olona sy ny foko manerantany. Mpandray anjara 1,000 90 avy amin'ny firenena XNUMX no hanatrika ny Universe Unad ety an-tsehatra hanolotra sy hanolotra ny haren-kolontsainy amin'ny Art, Sport & Science.
“Isan-taona noho ny fanatontoloana dia maro ny fomban-drazana, fomba amam-panao ary fahendrena fahizay avy amin'ny olona sy foko isan-karazany no very sy mihamaro hatrany. Ny fitandroana ny lova lehibe an'ny razambentsika dia ilaina amin'ny fiatrehana ireo fanambin'ny ho avy amin'ny andraikitra sy maharitra. Miaraka amin'ny Nomad Universe dia namorona endrika manerantany vaovao izahay hanehoana, hijerena an-tsary sy hitehirizana ny etona-kanto, ny etona-fanatanjahan-tena & ny etno-siansa manerana an'izao tontolo izao, mifototra amin'ny fomban-drazana taloha sy ny lova ara-tantara, "hoy Andriamatoa Askhat Akibayev, filohan'ny Ny fikambanam-be eran-tany Ethnogames.
Ny Fetin'ny rameva King Abdulaziz no fetin'ny rameva lehibe indrindra eran-tany, tanterahina isan-taona eo ambany fiahian'ny Mpanjaka Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ny Fetibe dia hetsika ara-kolontsaina, toekarena ary fanatanjahan-tena isan-karazany izay manasongadina ny lova ary maneho ny halalin'ny kolontsain'ny Fanjakan'i Saudi Arabia. Amin'izao fotoana izao dia manomboka amin'ny 21 Febroary ka hatramin'ny 24 martsa 2019 any akaikin'ny tanàna Al-Sayahid, 150 kilometatra miala ny renivohitra Riyadh. Ny toerana Festival, izay toerana maharitra, dia ahitana fenitra ara-teknika avo lenta indrindra toy ny toeram-ponenana manokana ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fetibe miaraka amina fotodrafitrasa avo lenta sy be pitsiny amin'ny velaran-tany 30 tapitrisa metatra toradroa, notsidihin'olona 35,000 isan'andro. Nandritra ny taonjato maro ity toerana manan-tantara ity dia natao ho toeram-pivoriana ho an'ireo mpivaro-mandeha rameva tonga avy amin'ny toerana rehetra amin'ny Saikinosin'i Arabia.
“Nomad Universe ao anatin'ny rafitry ny The King Abdulaziz Camel Festival dia fihaonamben'ny vondron'olona sy foko manerantany, izay mivondrona amin'ny fitehirizana sy fanehoana ny mampiavaka azy ireo. Modely lehibe ho an'ny firaisankina amin'ny fahasamihafana sy mifanaraka amin'ny vinan'i Saudi Arabia 2030, "hoy Andriamatoa Askhat Akibayev, filohan'ny Confederation The World Ethnogames.
Ireo GM an'ny Brooklyn Bridge Marriott sy New Yorker Hotel dia miditra ao amin'ny Board of Hotel Association of NYC
BauhausLand mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy